कुरआनको पहिलो खण्ड सुरह अल फातिहाबाट सुरू हुन्छ । यस सुरहलाई उम्मुल किताब पनि भनिन्छ । पवित्र हदीसका अनुसार सुरह अल फातिहामा अल्लाह सर्वशक्तिमानले सबै किसीमका रोगहरू निको पार्ने गुण राखेका छन् । सुरह अल फातिहा बिस्मिल्लाहबाट सुरु हुन्छ । बिस्मिल्लाहको पठनबाट यो बताइएको छ कि हामीले प्रत्येक काम अल्लाहको नामबाट सुरु गर्दछौं, जो अति दयालु तथा कृपालु छन् ।
शुरु अत्यन्त करुणामय, परम दयालु अल्लाहको नामबाट । सारा प्रशंसाहरू अल्लाहकै निम्ति छन् जो सम्पूर्ण जगत्का ‘रब’ हुन्; जो अत्यन्तै करुणामय र परम दयालु छन्; जो बदला दिइने दिनका मालिक हुन् । हामी केवल तिम्रै उपासना गर्छौं र तिमीसित नै सहायता चाहन्छौं । हामीलाई सीधा मार्ग देखाऊ; ती व्यक्तिहरूको मार्ग (देखाऊ) जो तिम्रा कृपापात्र भए; ती व्यक्तिहरूको मार्ग होइन जसमाथि तिम्रो प्रकोप भयो; न पथभ्रष्टहरूको मार्ग नै ।
सुरह अल–फातिहा पवित्र कुरआनको पहिलो सुरह हो । यो सुरह वास्तवमा एउटा दुआ (प्रार्थना) हो जुन अल्लाहले आफ्ना भक्तहरूलाई सिकाएका छ्न । यस प्रार्थनाको महानता र यसको स्वीकृति बारे पैगम्बर मुहम्मद (स.) को आदेशबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । सहिह मुस्लिममा अबु हुरैरह (रजि.) बाट वर्णन गरिएको छ कि अल्लाहका संदेष्टाले भन्नुभयो कि अल्लाह भन्छन- “मैले नमाज, अर्थात सुरह अल–फातिहालाई आफू र भक्तहरु माझ दुई भागमा बाँडेको छु । जब मेरो भक्तले भन्छ कि सबै प्रशंसाहरु अल्लाहकै लागि छन् । संसारका सृष्टिकर्ता अल्लाह भन्छन् कि तब म भन्छु- मेरा भक्तले मेरो प्रशंसा गरे । जब भक्त मालिकि यौमिद्दीन भन्छन्, तब म भन्छु कि मेरो भक्तले मेरो महानता वर्णन गर्यो । जब मेरो भक्तले म संग सत्मार्गको निर्देशन माग्दछ, म भन्छु कि मेरो भक्तले जे माग्दछ, मैले उसलाई दिएँ ।
यसमा दुआ भन्दा पहिले ’दुआ’ को शिष्टाचार सिकाइएको छ र यसले यो पनि सिकाउँछ कि मानिसको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको सत्यको खोज गर्नु र उसले सीधा मार्गको अनुसरण गर्नु हो । तसर्थ अल्लाहको प्रशंसापछि यसैतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ कि मानिसको पहिलो चाहना भनेको सत्यमार्गको खोज, र त्यसको लागि प्रार्थना हो । अल्लाहको कृपाले जसले सत्यमार्गको तौफिक पाएका छन् तिनीहरु भाग्यशाली हुन् । यस सुरहमा यो पनि सिकाइएको छ कि केवल अल्लाह मात्र पूजायोग्य छन् । सबै प्रकारको मद्दतको लागि उहाँबाट नै सहयोग माग्नु पर्दछ । उनी बाहेक अरु कसै संग मद्दत माग्नु जायज छैन । अगाडि सत्य मार्गको अधिक व्याख्या गर्दै यो भनिएको छ कि सत्यमार्ग भनेको संदेष्टा तथा धर्मी व्यक्तिहरुको मार्गलाई जनाउँछ । यी नै ती मानिसहरू हुन् जुन अल्लाहको इनामका योग्य छन् । फेरी अगाडी अल्लाहको क्रोध भएका यहूदीहरू र इसाईहरूको मार्गबाट अल्लाहसंग शरण मागिएको छ । अल्लाहले हामी सबैलाई उहाँको निर्देशित भक्तहरूमा सामेल गरुन । आमिन
सुरह अल–बकरह हिजरतपछि अवतरण हुने सबैभन्दा लामो सुरहहरूमध्ये एक हो । यसका केही पदहरू हिजरत अगाडि नै अवतरित भइसकेका थिए । सुरह अल बकरह प्रार्थनाको स्वीकृतिको घोषणाको साथ शुरू भएको छ । त्यो यो कि जुन सत्यमार्गको प्रार्थना तिमीले गरेका थियौ जसको अनुसरण गर्नेहरू अल्लाहको इनामको भागिदार हुनेछ त्यस सत्यमार्गको संग्रह यो कुरआन हो । जसमा कुनै किसीमको संदेह छैन । जस कसैले यसलाई समात्छ र यसै अनुरूप जिवनयापन गर्दछ तिनीहरू नै वास्तविक सफलता प्राप्त गर्नेछन् ।
मदनी युगमा विपक्षीहरूको नयाँ समूह कपटीहरू (मुनाफिकहरु) पनि थिए । तसर्थ, अल्लाहले मुस्लिमहरूलाई उनीहरूको नैतिकताबारे पनि सचेत गराउँदै भने कि तिनीहरू यो सोच्दछन् कि उनीहरु अल्लाह र उसको संदेष्टालाई धोका दिइरहेका छन, जबकि सत्यता यो हो कि तिनीहरू आफैंलाई धोका दिइरहेका छन् । अन्तमा उनीहरूका लागि कष्टदायी सजाय रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अगाडि आम मानिसहरूलाई एउटै ईश्वरको पूजा गर्न दावत अर्थात निमन्त्रणा दिइएको छ, र संसारका सृष्टिकर्ता अल्लाहको उपकारहरूको सम्झना गराइएको छ । अगाडी ती मानिसहरूलाई जो कुरआन र संदेष्टाहरुको बारेमा शंकामा थिए तिनीहरुलाइ चुनौती दिइएको छ कि यदि तिमीहरु वास्तवमा शंकामा छौ भने, आफ्नो सबै सहयोगीहरुलाई बोलाउ र उनीहरुको सहयोगले कुरआन जस्तै सानो सुरह बनाएर ल्याउ । त्यसपछि यो पनि भनियो कि तिमिहरु यो कदापी गर्न सक्नेछैनौ ।
आदम र हव्वा को सृष्टिको घटना बयान गरेर मानव सृष्टिको उद्देश्य पनि स्पष्ट पारियो कि मानव पृथ्वीमा खलीफा हो । यस महान उद्देश्यको निम्ती, अल्लाहले आदमलाइ सबै शिक्षाहरु प्रदान गरे साथै मानवलाई सूचित गरिएको छ कि शैतान तिमीहरुको खुला दुश्मन (शत्रु) हो । उसबाट सँधै सावधान रहनु ।
यसभन्दा पहिलेका उम्मतहरुका तुलनामा इस्राइलका सन्तानहरूको श्रेष्ठताको इतिहासको वर्णन गरी मुस्लिमहरुलाई आफुमाथि विचार गर्न निमन्त्रणा दिएको छ । शफाअतको गलत आस्थालाइ अवैध घोषणा गरेको छ । किन भने त्यसमा परेर मानिसहरू असल कार्य गर्न छोडछन जसका प्रभावहरू कुकर्म र गुमराहको रूपमा प्रकट हुन्छ ।
मुस्लिमहरुलाई सल्लाह दिएको छ कि तिमीहरु एकाग्र भइ प्रार्थना गर्ने गर तथा जकात देउ । र यहुदि तथा इसाइहरुबारे मुस्लिमहरुलाइ निर्देशन दिँदै भनिएको छ कि तिनीहरुको धर्म अपनायो भए पनि तिनीहरु कहिल्यै तिमी संग खुशी हुँदैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई खुशी पार्ने चिन्ता नगर ।
इमामातको स्थानबाट इस्राइलका सन्तानहरूलाई हटाएर, मुहम्मद (स.) को उम्मतलाइ इमामतको पदको घोषणा गरियो । र त्यसको चर्चा इब्राहिम (अ.) को उल्लेखबाट शुरू भयो । यो पनि स्पष्ट गरियो कि इमामत तथा उत्तराधिकारीको अधिकार पैतृक होईन कि तिमी त्यसको योग्य छौ वा छैनौ, यो तिमीलाइ मिल्नेछ । बरु, यो प्रतिज्ञा केवल इब्राहीमको सन्तानमा तिनीहरुको लागि हो जो धर्मी तथा यसको योग्य छन । अत्याचारीहरू र अनाज्ञाकारीहरू यसको कहिल्यै योग्य हुँदैनन्।
आस्थावानहरूको लागि भोजनको प्रावधानको लागि प्रार्थनाको जवाफमा अल्लाहले स्पष्ट गरे कि जहाँसम्म आहारको सवाल छ, म अत्याचारीहरू र अनाज्ञाकारीहरूलाई सासांरीक जिवनको भोजन अवश्य दिनेछु तर आखिरतमा तिनीहरूका लागि पीडादायी यातना रहेका छ ।
यस अवसरमा, हजरत इब्राहिम (अ.) ले एउटा यस्तो रसुलको अवतरणको लागि दुआ गर्नुभयो जसले कुरआन र बुद्धिमता सिकाउन् र मानिसहरूलाई शुद्ध गरुन । अल्लाहले यस दुआ (प्रार्थना) लाई स्वीकार गरे र अन्तमा अन्तिम पैगम्बर मुहम्मद (स.) लाइ पठाए ।
इब्राहिम र याकूब (अ.) को एकेश्वरवादको उल्लेख गर्दै भनियो कि इब्राहिम र याकुबको शिक्षालाइ याद गर कि तिनीहरुले कसरी आफना संतानहरुलाइ शिर्क अनेकेशवरवादबाट रोकेका थिए यदि तिमी आफुलाई इब्राहीमी भन्छौ भने किन शिर्क गर्छाै ?
अल्लाहको रंग ग्रहण गर, निश्चित रुपमा सबभन्दा उत्तम रंग अल्लाहको रंग हो ।
अंतमा शहदते हक (सत्यको साक्षी) र तौहीद (एकेशवरवाद) को सन्देश आम मानिससम्म पु¥याउने कर्तव्यको बोध गराउँदैे भनिएको छ- र, अल्लाहबाट प्राप्त ‘साक्षी’ लुकाउने व्यक्तिभन्दा ठूलो अत्याचारी अरू को होला ?
عوام میں پھیلی 40 غلط فہمیاں